आईपिएल खेलेर ३२ लाख कमाएका सन्दिपले होबार्ट हुरिकेन्सबाट बिग ब्यास खेले बापत कति रकम पाउँछन् त ? | TajaKhabarTV
२०७७, ४ मंसिर बिहीबार १२:५१ November 19, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
एजेन्सी : नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने लगातार तेस्रो पटक अष्ट्रेलियाको बिग बास लिग (बीबीएल) टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा अनुबन्ध भएका छन् । औपचारिक रुपमा आज (बिहीबार) होबर्ट हरिकेन्सले सन्दीपले आफ्नो क्लबबाट बिग बास खेल्ने जानकारी दिएको हो।
‘मैले अस्ट्रेलियामा सँधै समर्थनमा माया पाएको छु। र, बिग ब्यासको उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धा सँधै उत्साही हुन्छ। ब्लन्डस्टोन एरेनामा खेल्नको लागि पर्खाइमा छु।’ सन्दीपले भनेका छन्। त्यस्तै हुरिकेन्सका प्रशिक्षक आडम ग्रिफ्तले सन्दीपको उपस्थितिले टिमको बलिङमा राम्रो हुने बताएका छन्।
नोभेम्बर १० तारिखमा सम्पन्न इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई मुम्बई इन्डियन्सले पराजित गर्दै आइपिएलको उपाधि जितेको थियो। फाइनलसम्म पुग्दा पनि सन्दीपले भने यो पटकको आइपिएलमा एउटा पनि खेल खेल्न पाएनन्। बिग बासमा भने सन्दीपले खेल्न पाउने सम्भावना धेरै छ।
यसअघि सन्दीपले दुई सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट बीबीएल खेलेका थिए । सन्दीपले बीबीएलमा २० खेलमा २६ विकेट लिन सफल भएका छन् । गत संस्करणमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा मेलबर्न फाइनल पुगेको थियो ।
बिग ब्यासमा सन्दिपको मुल्य कति ?
यसअघि दुबईमा सम्पन्न आईपिएलमा सहभागि सन्दिपले एक खेल खेल्न नपाएपनि सम्झौता रकम ३२ लाख र उपबिजेता बापत दिल्लीले प्राप्त गरेको रकमबाट खेलाडीले समेत केहि रकम पाउने भएकाले सन्दिपले लगभग ४५ लाख पाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उता बिगब्यासमा होबार्ट हुरिकेन्ससँग सन्दिपले कति रकममा सम्झौता गरे भन्ने बारे केहि आधिकारिक जानकारी दिएको छैनन् । तर क्रिकेट पण्डितहरुले बिग ब्यासमा सन्दिपले करिब ५० लाख भन्दा धेरै पाउने अनुमान गरेका छन् । यद्यपी यो एक अनुमान मात्र भएकोले यकिन भने गर्न सकिदैन ।